Ogaden News Agency (ONA) – Xubnaha maamulka Jaaliyadaha Al-Xasa iyo dalka Qatar oo shir isugu yimid
Xubnaha maamulka Jaaliyadaha Al-Xasa iyo dalka Qatar oo shir isugu yimid
Posted by ONA Admin	/ January 14, 2012
Waxa Jimcihii oo ku beegnayd 13/01/2012 shir isugu yimid xubnaha maamulka ee jahliyada Somalida Ogadeniya ee Al-Xasa ee bariga Sacuudi Carabiya. Sidoo kale ayaa habeenimadii Jimcaha ay shir hawleed isugu yimadeen maamulka jaaliyadda Qatar.
Kulanka jaaliyadda Al-Xasa ayaa loogu gogol xaadhayey shir weyne ay yeelan doonaan ururka haweenka Somaalida Ogadeniya ee Al-Xasa kaas oo lagu talo jiro ina la qabto 24/02/2012. kulankan ayaa waxaa ka soo qayb galay dhamaan xubnaha maamulka ee jahliyada.
Ra’yi isweydaarsi iyo dood dheer ka dib aya waxay xubnuhu isla meel dhigeen in shir weynaha uu noqdo mid si weyn loogu hawl galo, muhiimad gaar ahna la siiyo iyo in la wada ogaysiiyo dhamaan xunaha ururka haweenka ee magaalada Al-Xasa.
Dhanka kale waxay xubnuhu isla qireen in jahliyada Al-Xasa ay kaalin muhiim ah ka qaadato halganka ka socda Ogadeniya waxayna isku raaceen in sannadkan 2012 uu noqdo mid ka duwan sannadahii hore marka laga eego xaga abaabulka iyo wax qabadka.
Shirka ay yessheen maamulka jaaliyadda Qatar ayaa waxaa lagu eegay waxyaabihii u qabsoomay jaaliyadda sanadkii 2011ka, iyadoo warbixintii sanadkii tagay laga dhagaystay gudoomiyaha jaaliyadda iyo hogaanka dhaqaalaha ee jaaliyadda oo soo bandhigay xisaab-xidhkii sanadka. Wuxuu hogaanka dhaqaalaha ku usay warbixintiisa in sanadkii tagay uu 2ba jibarmay dhaqaalaha soo xarooday isagoo ku baraarujiyay xubnaha inay sanadkan socda ka faa’idaystaan waxyaabihii ka dhinaa oy kor u sii qaadaan hawlaha jaaliyadda.
Hogaanka warfaafinta oo ka soo qaygalay shirka maamulka jaliyadda ayaa uga xogwaramay xubanaha shirka fadhiyaya xaaladda uu ku suganyahay halganka.
Ugu dambeyn waxa shirka Al-Xasa iyo midka Qatar-ba lagu soo afjarey is fahan iyo shaqo qaybsi, iyadoo weliba lagu diiwaan galiyay ururka haweenka ee Al-xasa.